Mitombo ny tsindry mahazo an’i Egipta itakiana ny famotsorana ireo malaza mpiaro zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Fitazonana mitranga taorian'ireo fanafihana tsy an-kiaton'ny fanjakana amin'ny habaka sivily
Voadika ny 02 Desambra 2020 2:34 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, Ελληνικά, عربي, English, Italiano, English
Karim Ennarah, olona iray malaza mpiaro zon'olombelona ao Egipta, mankalaza ny faha-37 taonany any am-ponja. Sary nampiasaina rehefa nahazoana alàlana avy amin'ny Free Karim Ennarah.
Raha ny Alatsinainy teo dia tany am-ponja no nankalaza ny faha-37 taonany i Karim Ennarah, filohan'ny sampam-pitsarana heloka bevava ao amin'ny iray amin'ireo vondrona sangany amin'ny fiarovana zon'olombelona ao Egipta, nihamafy ireo antso fitakiana ny famotsorana azy, sy ireo namany miaraka voatàna aminy, ary nahazo tohana avy amin'ireo mpanohana manerana ny tany.
Voampanga ho nanao asa fampihorohoroana, ny 18 Novambra i Ennarah no nosamborina, niaraka tamin'ireo tomponandraikitra ambony roa avy ao amin'ny Hetsika Egiptiàna ho an'ny Zon'ny Tsirairay (EIPR), iray amin'ireo vondrona tena malaza ao Egipta amin'ny fiarovana zon'olombelona ary anisan'ireo vitsy mbola mijoro taorian'ireo fanafihana nandritra ny taona maro tsy nitsahatra nataon'ny governemanta tamin'ny habaka sivily. Ny fitazonana azy ireo, izay niteraka ahiahy maro, na dia teny anivon'ireo mpiaradia amin'i Egipta aza, isan'ireny i Etazonia, Frantsa ary ny Fanjakana Mitambatra, dia nitranga andro vitsy taorian'ilay fihaonana niresahana ny toedraharaha ao amin'ilay firenena Arabo.
Tamin'ny Alatsinainy, Jesse Kelly vadin'i Ennarah dia nanao antso hanohizana ny fanaovana tsindry misimisy kokoa amin'ireo Egiptiana manampahefana mba hamotsotra azy:
Izahay sy Karim nandritra ny fankalazana ny tsingerintaonany, efatra taona lasa izay. Feno 37 taona androany i Karim saingy any am-ponja izy raha tokony hankalaza izany miaraka amiko. Miangavy, tsidiho ny https://t.co/V7vjWBpP4J hijerenao izay azonao atao hanampiana hahazoana antoka ny famotsorana azy. @EIPR #FreeKarimEnnarah #freeEIPRstaff pic.twitter.com/hI1chBbQol
— Jess Kelly (@Jeky_Kelly) 30 Novambra 2020
Nisy fanangonantsonia iray natomboka sy naparitaka tao amin'ny media sôsialy ary nahasarika ireo mpanohana manerana izao tontolo izao ho an'ilay mpikatroka izay nosamborina nandritra ny fotoana nialàny sasatra tany amin'ny toeram-pialantsarana tao amin'ny Ranomasina Mena.
Olona iray tsotra nogadragadraina fahatany. Fantaro misimisy kokoa ato – https://t.co/RSmPCesSPB #FreeKarimEnnarah #FreeEIPRstaff @EIPR @jeky_kelly pic.twitter.com/jHfJv6WFvL
— Stephen Fry (@stephenfry) 30 Novambra 2020
Emma Thompson manatevina laharana ireo olona mirary fety sambatra noho ny tsingerintaona nahaterahany ho an'i Karim.
Azafady, tsidiho ny https://t.co/G2evUCkwFe ary soniavo ny fitakiana. #FreeKarimEnnarah pic.twitter.com/rA5UPaKNtw
— Free Karim (@freekarimnow) 30 Novambra 2020
Tao anaty fanambaràna iray navoaka ho setrin'ny kiaka erantany, ny minisitry ny raharaha ivelany ao Egipta dia nandà ny lazainy fa “ezaka fanindriana aloka ny fanadihadiana izay ataon'ny fampanoavana amin'ireo olompirenena egiptiàna miatrika vesatra fiampangàna”. Tao anatin'ilay fanambaràna, nampian'ny mpitondra teny avy amin'ny ministeran'ny raharaha ivelany fa ny fanjakana egiptiàna dia “manaja ny fotokevitry ny fanjakana tàn-dalàna sy ny fitoviana” ary iantohan'ny lalàna sy ny lalàmpanorenana egiptiàna ny fahalalahan'ny fiarahamonina sivily hanao ny asany.
Kanefa, ireo mpisolovava miaro ny zon'olombelona dia manohitra ilay fanambaràna nataon'ny fanjakana egiptiàna milaza ho mampanaja ny lalàna sy ny zon'olombelona. Ennarah, sy ilay lehiben'ny fitantanana ny EIPR, Mohammed Basheer, izay voatàna ny 15 Novambra teo, dia tsy manana fahafahana hihaona amin'ny fianakaviany hatramin'ny nisamborana azy ireo. Ny voalohany mba nahitàna an-dry zareo hatramin'ny Talàna nitazonana azy, dia tamin'ny fotoana nitondran'ny pôlisy an-dry zareo hiatrika fitsarana iray misahana ny asa fampihorohoroana, tao amin'ny Ivontoeran'ny Pôlisy, andro iray talohan'izay no fotoana nandraisan'ny fampanoavana fanapahankevitra hoe giazana ny fananan'ny EIPR.
Tao anaty bitsika iray nalefa ny Alahady teo, nolazain'ny EIPR fa nangatahan'ny mpisolovava azy ny hamelàn'ny Fampanoavana Ambony misahana ny Fiarovam-Panjakana ireo fianakavian'i Ennarah sy Basheer mba ho afaka mitsidika azy ireo, satria sady “tsy hita niseho, no tsy tsikaritra na nandrenesam-baovao hatramin'ny nahatongavan-dry zareo tao amin'ny fanadihadiana tao Tora, na ny tao amin'ny fonjan'i Limna Tora,” entina ilazana ireo fonja roa itànana ireo mpikatroka.
Ny tale mpanatanteraky ny EIPR, Gasser Abdel-Razek, nandritra ny fisamborana ny 19 Novambra, dia natoka-monina anaty fonjakely mangitsy, tsy avela hahazo fitafiana mafàna ary nosolaina ny lohany. Nolazain'ny Amnesty International tao anaty fanambaràna iray tamin'ny 24 Novambra, fa atahorany “atao fanahy iniana tazonina amin'ny fomba tsizarizary ity bekotro maroholatry ny fiarovana zon'olombelona, raim-pianakaviana niteraka roalahy ity, mba hamaizana azy noho ny asa fiarovana zon'olombelona ataony.”
Ny tale mpisolo toerana ao amin'ny EIPR, Hossam Bahgat, nilaza tamin'ny 28 Novambra fa taorian'ny fiakaran'ny tsindry natao an'ireo manampahefana vao mba nohatsaraina ny fomba nitazonana an'i Abdel-Razek.
Nahitam-bokany ny kiaka nataonareo. Tsy noana sy mangatsiaka intsony i Gasser. Miangavy, aza mitsahatra ? https://t.co/a13FUAKWLR
— hossam bahgat (@hossambahgat) 28 Novambra 2020
Ny vesatra fanenjehana ho nanao asa fampihorohoroana — atrehan'ireo olona telo ireo — dia efa marobe ireo mpiaro zon'olombelona nampiharan'ny fanjakàna egiptiàna azy nandritra ny taona maro faramparany, ary betsaka amin'izy ireny no mbola mihiboka any am-ponja. Lavin'ny fanjakàna egiptiana ny filazàna azy ho managadra noho ny resaka pôlitika.
“Tena maharikoriko ny famaliana faty ireo mpiaro zon'olombelona avy amin'ny ONG iray mpiaro zon'olombelona sisa am-perinasa ao Egipta, noho izy ireo nanatanteraka fotsiny ny zony hiteny malalaka tamin'ny firesahana momba ny toedraharahan'ny zon'olombelona ao Egipta,” hoy ny nolazain'ireo manampahaizana manokana momba ny zon'olombelona avy ao amin'ny Firenena Mikambana, tao anaty fanambaràna iray nivoaka tamin'ny 27 Nomvabra, taorian'ireo fisamborana nanjo ny EIPR.
Efa nandritra ny 18 taona ny EIPR sy ireo mpikambana telo tao aminy nosamborina ireo no lohalaharana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ao Egipta. Hatramin'ny 2013, nijoro niaro mpikambana an'arivony avy amin'ny mpanohitra notazonina tany anaty fonjakely egiptiàna ry zareo, fony lasa teboka fiaingàna ho an'ny fampielezankevitra tsy mbola nisy toa azy natao hamelezana ny mpanohitra ny fanonganana ilay hany filoha voafidim-bahoaka tao amin'ny firenena.
“Soritan'ireny fisamborana ireny ny loza mitatao henjana atrehan'ireo mpiaro zon'olombelona ao Egipta isanandro rehefa eny am-panatontosàna ny asan-dry zareo ara-drariny,” hoy ny voalazan'ilay fanambaran'ireo manampahaizana manokan'ny Firenena Mikambana.
Tamin'ny Febroary, ilay mpikaroka momba ny miralenta avy ao amin'ny EIPR’, Patrick Zaki, dia nosamborina teo am-piverenana tao Egipta rehefa avy any Italia, toerana nianarany. Tazonina vonimaika any am-ponja miandry ny fitsaràna azy noho ny vesatra “asa fampihorohoroana sy fihantsiana fankahalàna ” izy.